တက္ကစီဆရာအတွေ့အကြုံ – Grab Love Story
အ သက်(၄၀)၊အသားညှိညှိ၊အရပ်၅ပေ၈လက်မရှိပြီး ၊ တက္ကစီမောင်းသော ကိုနိုင်ဝင်း၏ ရန်ကုန်မြို့ပြင်းပြသော အပူချိန်အောက်ဝယ် တွေ့ကြုံဆုံခဲ့ရသော ဇာတ်လမ်းအထွေထွေဖြစ်သည်။ “တက်ကစီ…” “ညီလေး ဘယ်သွားမလို့လဲ…..” ” ကန်တော်ကြီးအကို……” “၃၅၀၀တော့ပေး…..ရလား….” “၃၀၀၀တော့ထားလိုက်အကို….” “တက်ကွာ ရတယ်….” ကိုနိုင်ဝင်းသည် တွံတေးဇာတိဖြစ်ပြီးလူပျိုကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ကာ ရန်ကုန်မြို့၊ ကျောက်မြောင်းရှိအမတစ်ယောက်အိမ်မှာနေ၍ အလုပ်လာလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရောက်ရောက်ချင်း ရေသန့်စက်ရုံတွင်ရေသန့်ပို့ကာ ကားအုံနာပေးမယ့်မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရှိ၍ တက္ကစီပြောင်းဆွဲခြင်းဖြစ်သည်။ နေ့ခင်းနေ့လည်ကားနားနေခိုက် ဂိတ်မှာ သူငယ်ချင်းများနှင့်လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ပြီး…. “နေကလည်းပူလိုက်တာဗျာ….” “ဟုတ်ပ……” “ညပိုင်းဆွဲရင်ကောင်းမလားမသိဘူးဗျာ…” “ညပိုင်းကပိုက်ဆံတော့ပိုရပေမယ့် စိတ်မချရဘူးဗျ..”
“ခင်ဗျား သတင်းကြားပြီးပြီလား ….” “ဘာသတင်းလဲ…” “တက္ကစီသမားကို သတ် ကားလုပြေးသွားတာလေ…” “ကြားပဗျာ ဒါတွေကြောင့်လည်း ညပိုင်းမဆွဲရဲကြတာလေဗျာ…” “အခုခေတ်ကကိုယ်က သူ့မယုံ သူကကိုယ့်မယုံနဲ့လေ….ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ကားသမားကမုဒိန်းကျင့်သတ်သွားတာလည်းရှိတော့ ….အခုဆို မိန်းကလေးတွေက ကားတောင်တစ်ယောက်တည်းဆိုမစီးရဲကြတော့ဘူး… ” “လူအမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာ အောကားပြတဲ့ကားသမားနဲ့…” “ဟုတ်ပ ဒါမယ့်ဗျာ တကယ်စိတ်ရင်းကောင်းပြီး မိသားစုကိုရှာကျွေးနေကြတဲ့ကားသမားတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်…” “ကားမောင်းရင် ရတဲ့ဗဟုသုတတွေပေါ့ဗျာ” “တီ တီ တီ တီ တီ…….” “ကိုနိုင်ဝင်း ခင်များဖုန်းလား…..အသံမြည်တယ်….” “ဟာ ဟုတ်ပ ခဏဗျာ ထွက်ပြောလိုက်ဦးမယ်…” “ဟယ်လို..မခင်မ ပြော..” “ကိုနိုင်ဝင်း ရှင်အားလား…” “အားတယ်လေ ဘယ်သွားဖို့…” “တွေ့ချင်လို့ ခုလာခေါ်….အိမ်မှာပဲ…” မခင်မ ဆိုတာ အသက်(၄၀)နှစ် တစ်ခုလပ်၊မဲစုခြင်း၊ အထည်ရောင်ခြင်းလုပ်ကိုင်ပြီး ယောကျာ်းနဲ့ကွဲပြီး ကလေး၂ယောက်ရှိကာ ရွှေဘိုမင်းကြိုက်ခန္ဓာကိုယ် ရေဆေးငါးတဖွယ် တင်းကားကာ အသားအရေဖြူဝင်းသောမိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်ဈေးထဲလက်ကားအထည်သွားယူခြင်း မဲလိုက်ကောက်ခြင်းတို့တွင် ကိုနိုင်ဝင်းနဲ့အမြဲသွားကာ … လူပျိုကြီးကိုနိုင်ဝင်းနဲ့ငြိသွားခြင်းဖြစ်သည်။ မခင်မတို့အိမ်ရှေ့ရောက်သော ထဘီအပြာနှင့် အကျီအပြာရောင်အပွင့် အကွက်ကိုဝတ်ဆင်ကာ ဆံပင်ကိုထုံးထားသော မခင်မ ကားနားပြေးဆင်းလာပြီး.. “သွားနေကြနေရာ….” “ဟုတ်ပါပြီဗျာ…” “အုံနာခရပြီလား…” “ရပြီ အေးဆေး သွားမယ်…” ပုံမှန်သွားနေကြ မြောက်ဥက္ကလာက ဟိုတယ်တွင် အခန်းယူပြီး အခန်းထဲအရောက်…သိုင်းဖက်ပြီး.. ” လှနေတာ ခင်မက ဒီနေ့,..အရမ်းကို…” စကားတပြောပြောနူတ်ခမ်းချင်းတစ်ချက်တစ်ချက်တေ့နမ်းကာ… “အကျီ ချွတ်လိုက်လေ….” ကိုနိုင်ဝင်းရဲ့ အသားညှိညှိတောင့် တင်းသော ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ပြီး. “သန်လိုက်တာ ရှင်… မက်မောစရာကြီး…” ကိုနိုင်ဝင်းလည်း မခင်မအကျီချွတ်ကာ ဘော်လီကိုထိန်းထားသော ဖြူဝင်းတင်းရင်းသောရင်နှစ်မွှာကိုကြည့် လီးတောင်နေကာ… “အကုန်ချွတ်ကြမယ်…” မခင်မလည်ပင်းတစ်ဝိုက်ကိုနမ်းရိူက်ပြီး …တစ်ကိုယ်လုံးပွတ်သက်ပြီး လျှာချင်းယစ်ပက်ပါတော့တယ်… လျှာချင်းကစားရုမက လက်တွေမှာလည်း အပြန်အလှန်ပွတ်သက်နေကာ..ကိုနိုင်ဝင်းကို ကုတင်ပေါ်လှဲခိုင်းလိုက် မခင်မမှာ ကိုနိုင်ဝင်းနို့သီးခေါင်းများကို လက်နဲ့ချေကစားကာ လီးကိုမူတ်ပါတော့တယ်..
“ဟူး…ပြွတ် ပြွတ် ဟူး ဟူး….” လီးတချောင်းလုံးကိုယက်ကာ နှာခေါင်း ဖြင့် လီးနံစူးစိုက်ရူကာ အုများကိုပါးစပ်နဲ့ ဆွဲစုပ်ပါတော့တယ်…. “ဟူး ဟူး အီး ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ်….” ထိုမှတဖန် ချက်နားကိုတက်လာကာ ချက်ကိုလျှာနဲ့မွှေဆော့ကာ လက်မှ ဂွင်းထုပေးပါတော့တယ်…., ကိုနိုင်ဝင်းလီးမှ အရေကြည်များထွက်နေကာ လီးထိပ်ကို လက်နဲ့ဖွဖွလေး ပွတ်ဆော့ကာ…ကိုနိုင်ဝင်းနို့သီးခေါင်းများကို ကိုက်ဆော့ပါတော့တယ်… “ကောင်းလိုက်တာ… အ့ အ့ အား ကောင်လား ….” ထို့နောက် အကြောများထောင်တင်းနေသောလီးတချောင်းလုံးပါးစပ်နဲ့ငုံကာ… ပါးစပ်နဲ့ထုတယ်… ပြွတ် ပြွတ် အု အု ပြွတ် “အ အ အား….အ့ ” ပြတ်…… လီးမှာနွေးအိနေကာ ကိုနိုင်ဝင်းလီးမှလရေများပါးစပ်ထဲ ပန်းထည့်လိုက်တယ်…မခင်မမှာ ကုန်စင်အောင်ယက်ပြီး လှဲအိပ်လိုက်တယ်….. ကိုနိုင်ဝင်းမှာ အမွှေးရိတ်ပြီး မွေးကြိုင်သောအဖုတ်ကို လျှာဖြင့်တစပ်စပ်ထိုးယက်နေသည်မှာ မရပ်မနားပင်… ပလွပ် ပလပ် ပလပ် ပလပ်…. ထို့နောက်အစိလေးကိုငုံကာ လက်ညှိုးနှင့်အဖုတ်ထဲမွှေပြီး…အဖုတ်မှအရည်ကြည်များထွက်လာသောအခါ အဖုတ်နူတ်ခမ်းသားများကိုအသံမြည်အောင်ဆွဲစုပ်ကာ အဖုတ်နူတ်ခမ်းကိုဖြဲကာ လျှာဖြင့်မွှေပါတော့တယ်…
“အူး အူး” မခင်မမှာ ကိုနိုင်ဝင်းခေါင်းကိုအဖုတ်နဲ့ဖိကပ်ကာ…. “ကာင်းလိုက်တာ…ကောင်းလိုက်တာ….” အဖုတ်ထဲလျှာဖြင့်မွှေပြီး ဖင်ကုန်းခိုင်းကာ ဖင်ပေါက်ကိုလျှာဖြင့်ထိုးလိုက် လျှာကို လှည့်ကာ လျက်တယ် စုပ် တယ်….လက်မှလည်းအစိကိုဖိချေကာ… “ဟူး ဟူး ကောင်းလို့သေမှာ ဟူး …အူး…” ထို့နောက်အဖုတ်ထဲ လက်ညှိုးလက်ခလယ်နဲ့ ထိုးကာ တရပ်စပ်နိူက်တယ်… ပလပ် ပလပ် ပလပ် အူး အူးအူး အူး .. မခင်မအရည်များလျှံကျနေကာ …ကော့တက်နေပြီး…..ကိုနိုင်ဝင်းမှာအရှိန်မရပ်ဘဲ တရပ်စပ်နိူက်ပါတော့တယ်… ပြွတ် ပြွတ် အူး အူး အူး….. မခင်မကော့တက်နေမျက်နှာရူံမဲ့နေကာ အရေများထွက်ကာ ပြီးသွားပြီး…ကိုနိုင်ဝင်းလည်း အရည်များယက်ပေးကာ နှစ်ယောက်ဖက် ကစ်ဆင်ရိုက်ကာတစ်ယောက်ဝင်သက်ထွက်သက်ကိုတစ်ယောက်ရူရိူက်နေသည်။… ကိုနိုင်ဝင်းနှင့်မခင်မဟာ မလိုးမီ ပထမတစ်ချီ ပါးစပ်နဲ့ပြီးအောင်လုပ်ပေးပြီးမှ ပုံမှန်လိုးကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဒုတိယအချီမှာကြာ၍ပိုလိုး၍ကောင်းခြင်းကြောင့် ထိုအတိုင်းအမြဲလုပ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။
နမ်းရိုက်ကာအနားယူပြီးနောက် ကိုနိုင်ဝင်းမှာ မခင်မအပေါ်တက်ခွကာလီးကို အဖုတ်ထဲတော့ကာ… ဖတ် ဖတ် ဘွတ် ဘွတ် အွတ် အအ ဖတ် ဘွတ် ရွတ် “အအ အား အား..” တရပ်စပ်မီးကုန်းယမ်းကုန်လိုးပါတော့တယ်…”အအ အွတ် အွတ် ကောင်းလိုက်တာ သန်လိုက်တာ…အအ အွတ် စီးပိုင်နေတာပဲ…အွတ် အအ” အဖုတ်နဲ့လီးမှာတရပ်စပ်ဂဟေဆော်နေကာ ဖတ် ဘွတ် အွတ် ဖတ် ဖတ် အွတ်… “‘ပြောင်းရအောင် ခင်မတက်ဆောင့်မယ်…” လီးကြီးကိုထောင်၍ တက်ထိုင်ကာ ကိုနိုင်ဝင်းလက်မောင်းတွေကိုင်ကာမွှေနေတာ အကြမ်းဆုံးအထိပဲ… “အား အား အား ကောင်းတယ်ဗျာ” ” အားခင်မမွှေတာကြိုက်လား အား အား…” “ကြိုက်တယ် ကြိုက်တယ်” “အွတ် အွတ် ဖွတ် ဖွတ် ဖတ် ဖတ် အွတ် အွတ် အအအ “” ခင်မမှာဗိုက်ကိုလက်နဲ့ဖိကာ အသားကုန်တက်ဆောင့်နေရင်း.. အသံတွေ ညံလာတဲ့ လိုးပွဲဟာ ရမ္မက်ထန်နေတယ်။ .
.. အွတ် အွတ် အအအ ဖတ် ဖတ် အွတ် အွတ် အွတ် အွတ် ” ခဏ ခင်မလှဲလိုက် အကို့အပေါ်က လိုးမယ်” မခင်မကိုဖက်ကာ အောက်ကနေ လီးကိုကော့လိုးပါတော့တယ်.. အွတ် အွတ် အအအ ဖတ် ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ်….. အဖုတ်ကြီးကိုအောက်ကထိုးခွဲတော့ မခင်မမှာ ရှုံ့မဲ့ကာ … အသားကုန်ကောင်းနေပါပြီလေ…. ထို့နောက်ကစ်ဆင်ဆွဲကာ အမောဖြေပြီး… “ခင်မ ကုန်းပေး…” ဖင်ကြီးကို လက်နဲ့ကိုင်ကာ လီးကို တရပ်စပ်ထိုးလိုးပြီး မညှာမတာပြင်းပြင်း စောင့်လိုးတယ်… ဖုံး….ဖုံး…. ဘွတ် အွတ် ဘတ် ဘတ်…. အသားကုန်ဆောင့်ကာ မခင်မမှာ အိပ်ရာကိုအတင်းဆုပ်ကိုင်ကာ… “ကာင်းတယ် အွတ် အွတ် …လိုး လိုး…. လိုးစမ်း ကြမ်းကြမ်း” ကိုနိုင်ဝင်းမှာ အံကြိတ်ဖီးခံရင်း အချက် ၄၀ကျော် ဆောင့်ပြီး လရေများပန်းထုတ် ကာ နှစ်ယောက်အတူတူ ထပ်လျက် အမောဖြေ၍ စကားမပြောဘဲမှိန်းနေကြတယ်။ တစ်နာရီခန့်မှိန်းအနားယူ၍ အတူတူ ရေချိုးကာ…ပြန်ထွက်လာခဲ့ပြီး မခင်မကိုလိုက်ပို့ကာ ကားအပ်ဖို့အုံနာအိမ်သို့ ထွက်လာပါတော့တယ်…. ပြီးပါပြီ..
မာ ယာ့ ကို မ စိမ်း ပါ နဲ့ ကွာ